ဘယ်လောက် လှ တဲ့ မိန်းမ ဖြစ် ပါစေ ရုပ်ဆိုး တဲ့ မိန်းမဖြစ်ပါစေ မွေးခန်းထဲ ရောက် ရင် အတူတူပါပဲဆိုတာ သက်သေပြချက် – Zartiman
Zar Ti Man | March 14, 2021 | Knowledge | No Comments
ဘော်ဒါ တစ်ဗွေ ရဲ့ မွေးခန်း ထဲက ကမောက်ကမ အကြောင်း ပြောပြ ရဦးမယ်။ အဲ့ကောင်.. မွေးလူနာ ပေါင်ကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး မွေး ပေးရော.. ကလေးက ခေါင်းကြီးတော့ မွေးလမ်းကြောင်း ချဲ့ရတယ်။ကလေးက အပြင်ရောက်.. အချင်း က ချပြီး .. အဲ့ ချဲ့ထားတဲ့ ဟာ ကို ပြန်ချုပ်ရတော့မယ် ။ ချုပ်ခါနီး.. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်တော်ချော က Saline နဲ့ အရက်ပြန်နဲ့ မှားဆေးမိရော။ လူနာ ခမျာ.. ထွန့် ထွန့် လူး 🥵🥵 လူနာက ထအော်ရော.. ….အမလေး ဆရာရဲ့… စပ်လိုက်တာ… မှုတ်ပေး ပါဦး.. မှုတ်ပေးပါဦးနဲ့… ဆိုပြီး။ အဲ့တော့မှာ အဲ့ကောင် သူအမှားသူသိ ပျာပျာသလဲ နဲ့ Mask ကြီး အောက်ဆွဲချပြီး… တဖူးဖူး နဲ့ မှုတ်ပါလေရော 😵😵 !
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူ ပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမ ထွက်ရင်… တော်ပြီ။ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက် တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး🤮🤮။မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့ အချက်က ခလေးကလည်း မထွက်သေး ညှစ်ရတာလည်း အားကုန် မော ပန်း ဗိုက်ကလည်း.. ရှယ် နာပြီးရင်း နာ အဲ့ အချိန်မှာ.. ကျိန်ဆဲပြီ ။ဒင်း လုပ်လို့ ငါ့မှာ ဒုက္ခ တော်တော်ကြီးဒယ်.. ဒင်းကတော့ ဘယ်မယား ငယ်ဆီ သွားနေလဲ မသိ … သေနာကြီး.. ဘာညာ ။ ကျနော်တို့ ကတော့ ရယ်နေလိုက်တာပဲ။ဒါပေသိ.. ခလေး ထွက်ပြီး ခလေး ငိုသံ။
ကြားရပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့တွေ.. ပြုံးနေတော့တာပဲ ။ (အောက်က မွေးပေးရတဲ့ ကောင်တွေသာ ပေရေလို့) အမူးပြေတော့။ထန်းပင်ပေါ် မော့ကြည့်မှာ လည်း ကိုယ်ဒွေက သိနေပြီးသား🤣🤣 ။မယုံမရှိ နဲ့ ကြုံဖူးတယ်။ မွေးကုတင် (မွေး စင်ပေါ်)မှာ ညှစ်ရင်း ညှစ်ရင်း မခံနိုင် တော့လို့ ဆင်းပြေးတာ..မွေးခန်း အပြင်ကို ဖင် တုံးလုံး နဲ့… 😎😎 ကိုယ်ဒွေခမျာ လိုက် ဖမ်းရသေး … ပွေ့ ခေါ်လာရသေး.. ဇာတ်တွေ လည်း နာရပါ့တော် ။ဒီထက် ပိုနာတာ ရှိသေး.. မွေးခန်း တစ်ရက်မှာ… အဲ့ မွေးခန်းထဲ ယောက်ျား ဆိုလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း.. ကျန်တာ မိန်းခလေး တွေချည်းပဲ ။အဲ့.. လူနာ တောင်းဆိုတာက တစ်မျိုး ။ယောကျာ်း ဆရာဝန် တစ်ယောက်လောက်.. ။
သူ့ဘေးနား နေပေးပါတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ အမ.. ဆိုတော့ လက်လေး ကိုင်ထား ချင်လို့ပါတဲ့ ။ ဆရာ့ လက်လေးကို ကိုင်ပြီး ညှစ်ရရင် ခလေး မြန်မြန် ထွက်မှာ ကျမ သိတယ်တဲ့.. သေရော။ဆရာမ ကလည်း နေပေးလိုက်ပါ ဆရာရယ်.. သူစိတ်ချမ်းသာအောင်..ကျမ အောက်ကနေ မွေးပေးလိုက်ပါ့မယ်တဲ့။ မယ်မင်းကြီးမ.. ကိုယ့်လက်ကို အတင်း ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်.. အားရ ပါးရညှစ်.. ကလေးလည်း ထွက်ရော ကိုယ့် လက်တွေလည်း ကျိုးမတတ်။အတော် နာတဲ့ ဇာတ်.. ။တချို့ က လည်း လာ..လာ ချည်သေး.. ဆရာ.. ပြန်ချုပ်နေပြီလား… ? …..ဟုတ် … ဘာလို့လဲ နာလို့လား အမ…! မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရေ…ကျမ ဟိုဒင်းကို လှလှလေး ပြန်ချုပ်ပေးပါတဲ့… (လှနေတော့ရော.. ဘယ်သူက မြင် မှာမို့လည်းမသိ) ကိုယ်ဒွေကတော့ အာလူးဆာဝန်ဆိုတော့ ရှယ်လှသွားပြီ အမရေ.. လိုက်တော့ မကြွားနဲ့… ။
ဘျောဒါ တဈဗှေ ရဲ့ မှေးခနျး ထဲက ကမောကျကမ အကွောငျး ပွောပွ ရဦးမယျ။ အဲ့ကောငျ.. မှေးလူနာ ပေါငျကွား ငုတျတုတျထိုငျပွီး မှေး ပေးရော.. ကလေးက ခေါငျးကွီးတော့ မှေးလမျးကွောငျး ခြဲ့ရတယျ။ကလေးက အပွငျရောကျ.. အခငျြး က ခပြွီး .. အဲ့ ခြဲ့ထားတဲ့ ဟာ ကို ပွနျခြုပျရတော့မယျ ။ ခြုပျခါနီး.. သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရတယျ။အဲ့ဒီမှာ ကိုယျတျောခြော က Saline နဲ့ အရကျပွနျနဲ့ မှားဆေးမိရော။ လူနာ ခမြာ.. ထှနျ့ ထှနျ့ လူး 🥵🥵 လူနာက ထအျောရော.. ….အမလေး ဆရာရဲ့… စပျလိုကျတာ… မှုတျပေး ပါဦး.. မှုတျပေးပါဦးနဲ့… ဆိုပွီး။ အဲ့တော့မှာ အဲ့ကောငျ သူအမှားသူသိ ပြာပြာသလဲ နဲ့ Mask ကွီး အောကျဆှဲခပြွီး… တဖူးဖူး နဲ့ မှုတျပါလရေော 😵😵 !
ဘယျလောကျ လှတဲ့ မိနျးမ ဖွဈစေ ဘယျလောကျ ရုပျဆိုးတဲ့ မိနျးမဖွဈစေ မှေးခနျးထဲ ရောကျရငျ အတူတူ ပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပျဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ခြီးမ ထှကျရငျ… တျောပွီ။ကိုယျဒှေ အတှကျတော့ ခြီးမထှကျ တဲ့ မိနျးမ က ခဈြဖို့ကောငျးတာဗြ။ ခလေး မထှကျခငျ.. ခြီး အရငျ ထှကျတတျတာကိုး🤮🤮။မိနျးမ အမြားစု (တခြို့မပါ )တူညီတဲ့ အခကျြက ခလေးကလညျး မထှကျသေး ညှဈရတာလညျး အားကုနျ မော ပနျး ဗိုကျကလညျး.. ရှယျ နာပွီးရငျး နာ အဲ့ အခြိနျမှာ.. ကြိနျဆဲပွီ ။ဒငျး လုပျလို့ ငါ့မှာ ဒုက်ခ တျောတျောကွီးဒယျ.. ဒငျးကတော့ ဘယျမယား ငယျဆီ သှားနလေဲ မသိ … သနောကွီး.. ဘာညာ ။ ကနြျောတို့ ကတော့ ရယျနလေိုကျတာပဲ။ဒါပသေိ.. ခလေး ထှကျပွီး ခလေး ငိုသံ။
ကွားရပွီ ဆိုရငျတော့ သူတို့တှေ.. ပွုံးနတေော့တာပဲ ။ (အောကျက မှေးပေးရတဲ့ ကောငျတှသော ပရေလေို့) အမူးပွတေော့။ထနျးပငျပျေါ မော့ကွညျ့မှာ လညျး ကိုယျဒှကေ သိနပွေီးသား🤣🤣 ။မယုံမရှိ နဲ့ ကွုံဖူးတယျ။ မှေးကုတငျ (မှေး စငျပျေါ)မှာ ညှဈရငျး ညှဈရငျး မခံနိုငျ တော့လို့ ဆငျးပွေးတာ..မှေးခနျး အပွငျကို ဖငျ တုံးလုံး နဲ့… 😎😎 ကိုယျဒှခေမြာ လိုကျ ဖမျးရသေး … ပှေ့ ချေါလာရသေး.. ဇာတျတှေ လညျး နာရပါ့တျော ။ဒီထကျ ပိုနာတာ ရှိသေး.. မှေးခနျး တဈရကျမှာ… အဲ့ မှေးခနျးထဲ ယောကျြား ဆိုလို့ ကိုယျတဈယောကျတညျး.. ကနျြတာ မိနျးခလေး တှခေညျြးပဲ ။အဲ့.. လူနာ တောငျးဆိုတာက တဈမြိုး ။ယောကျြား ဆရာဝနျ တဈယောကျလောကျ.. ။
သူ့ဘေးနား နပေေးပါတဲ့။ ဘာဖွဈလို့လဲ အမ.. ဆိုတော့ လကျလေး ကိုငျထား ခငျြလို့ပါတဲ့ ။ ဆရာ့ လကျလေးကို ကိုငျပွီး ညှဈရရငျ ခလေး မွနျမွနျ ထှကျမှာ ကမြ သိတယျတဲ့.. သရေော။ဆရာမ ကလညျး နပေေးလိုကျပါ ဆရာရယျ.. သူစိတျခမျြးသာအောငျ..ကမြ အောကျကနေ မှေးပေးလိုကျပါ့မယျတဲ့။ မယျမငျးကွီးမ.. ကိုယျ့လကျကို အတငျး ဖွဈညှဈဆုပျကိုငျ.. အားရ ပါးရညှဈ.. ကလေးလညျး ထှကျရော ကိုယျ့ လကျတှလေညျး ကြိုးမတတျ။အတျော နာတဲ့ ဇာတျ.. ။တခြို့ က လညျး လာ..လာ ခညျြသေး.. ဆရာ.. ပွနျခြုပျနပွေီလား… ? …..ဟုတျ … ဘာလို့လဲ နာလို့လား အမ…! မဟုတျပါဘူး ဆရာရေ…ကမြ ဟိုဒငျးကို လှလှလေး ပွနျခြုပျပေးပါတဲ့… (လှနတေော့ရော.. ဘယျသူက မွငျ မှာမို့လညျးမသိ) ကိုယျဒှကေတော့ အာလူးဆာဝနျဆိုတော့ ရှယျလှသှားပွီ အမရေ.. လိုကျတော့ မကွှားနဲ့… ။
(ဒေါကျတာ တဇေကြျော… မမွေို့)